Alahady 20 Desambra 2020 - FJKM Amparibe Famonjena
Alahady faha-20 Desambra 2020
ALAHADY NATOKANA AM-BAVAKA NY FIKAMBANAN’NY MPITORY FILAZANTSARA VITA FIOFANANA (FMFF)
"Manaiky an’i Jesoa Mesia, ny mino"
Fotoana ivon’ny herinandrom-bokatry ny Fikambanan’ny mpitory Filazantsara vita fiofanana androany alahady 20 desambra 2020. Mbola ny lohahevitra » Manaiky an’I jesoa Mesia ny Mino » no banjinina amin’izao volana desambra izao.
Fotoana natokan’ny Sampana Tanora Zokiny nitondrana am-bavaka sy hanomezana valisoa ireo zanaky ny Fiangonana afa-panadinana ara-panjakana sy nahavita fianarana teo anivon’ny SEFALA, SETELA, SEMI ary miomana ho Mpitandrina.
Ny fotoana faharoa tamin’ny 10 ora no taterina amintsika izao. Rakotovololona Lova no nitarika ny fotoana. Razanamparany Clément, Katekista, no nitondra ny hafatry ny Tompo. Tompon’anjara hafa kosa, no nitari-bavaka mialoha ny vakiteny. Razafy Andrianaivo Michèle, Diakona no nanao ny vakiteny ao amin’ny Testamenta Taloha. Nisy Diakona nanohy ny vakiteny tao amin’ny Testamenta Vaovao.
Ny Salamo 2:7-12 no Tenin’Andriamanitra nangalana ny toriteny. Ny litorjia amin’ny endriny fahaefatra no nanatanterahina izao fanompoam-pivavahana izao.
Taorian’ny feon-javamaneno fidirana sy ny fanolorana sy ny fiarahabana apostolika dia niroso tamin’ny fiderana sy ny fanomezam-boninahitra an’Andriamanitra.
Novakiana teo am-pitsanganana ny Efesiana 1:3-6” Isaorana anie Andriamanitra, Rain’i Jesoa Kristy Tompontsika, Izay nitahy antsika tao amin’i Kristy amin’ny fitahiam-panahy rehetra any an-danitra, araka ny nifidianany antsika tao aminy, fony tsy mbola ary ny fanorenana an’izao tontolo izao, mba ho masina sady tsy misy tsiny eo anatrehany isika, rehefa notendreny rahateo amin’ny fitiavana isika mba ho Azy amin’ny fananganan’anaka amin’ny alalan’i Jesoa Kristy, araka izay ankasitrahan’ny fony, ho fiderana ny voninahitry ny fahasoavany, izay nanasoavany antsika maimam-poana ao amin’ny Malala .”
Nohiraina ny Hira FFPM 447:1-2-3 “Ianao ry Kristy Tompo”.
Taorian’izay dia natao ny vavaka fisaorana sy fifonana. Noho Ilay Andriamanitra Ray, Izay nanome voninahitra sy fanajana. Misaotra noho ny nanehoana fanajana sy fankatoavana, fitiavana, mitarika anay amin’ny fanatonana Anao. Manavao ny fanekena, fanoloran-tena izahay, hanompo anao. Mangataka ny Fanahy Masina mba hampifantoka amin’ny fanompoam-pivavahana.
FOTOANA HOAN'NY ANKIZY SY NY TANORA​
Zoky Rabako Miora, Mpampianatra K4, no nitondra ny fotoana natokana ho an’ny ankizy sy ny tanora.
Matio 1:21a “Ka hiteraka Zazalahy izy, ary ny anarany hataonao ho JESOSY, fa Izy no hamonjy ny olony ho afaka amin’ny fahotany” no andinin-tSoratra Masina nakana ny hafatra fohy.
Nohazavaina ny andinin-tSoratra masina ary ny hafatra nakana lesona tamin’izany:
Iza moa Jesoa na ny Mesia: raha ny dikany amin’ny teny grika dia Jehovah no Mpamonjy. Amin’ny teny Hebreo kosa, Jehovah ilay Mpanjaka voahosotra hanatanteraka ny fikasan’Andriamanitra.
Inona ary ny fikasan’ Andriamanitra?
Nidina tety an-tany ho tonga nofo Andriamanitra ary hamonjy izao tontolo izao, hanafaka antsika amin’ny fahotana satria tsy misy tiany ho very ety an-tany. Tiany ho voavonjy ny fanahintsika ary handova ny fiainana mandrakizay isika.
Hankalaza ny Noely isika amin’ny zoma 25 desambra, aoka tsy atao ho fandalovana ny fiainantsika izany fankalazana ny Noely izany, fa aoka ho atao ato am-pontsika. Ny fahatongavan’i Mesia ety ambonin’ny tany dia hamonjy ahy sy ianao, ary ho tanteraka ny fikasan’Andriamanitra.
Taorian’ny hafatra nataon’ny Zoky Rabako Miora dia nohirainy fianakaviamben’ny Sekoly Alahady ny FFPM 71:2 “Mifalia! Mifalia”.
FANKALAZANA NY TENIN'ANDRIAMANITRA
Araka ny Perikopa androany, mialoha ny vakiteny, dia natao ny vavaka.
Namaky ny Testamenta Taloha, Razafy Andrianaivo Michèle tao amin’ny Salamo 2:7-12.
Ary ny diakona tompon’anjara hafa ny Testamenta vaovao Matio 1:18-25 sy Hebreo 1:8-12.
Nohiraina ny Hira FFPM 71:1-3-4 “Mihainoa! Mihainoa”
Razanamparany Clément, katekista, no nitory ny Tenin’Andriamanitra.
Ny teny nangalàna ny hafatra dia avy ao amin’ny Soratra Masina ao amin’ny Salamo 2:7-12, izay milaza ny faminanian’i Davida ny amin’ny fiavian’i Kristy.
Hamafisiny ao amin’ny Asa Apo 4:25, voalaza amin’izany fa hiseho ny fanoherana ataon’ny firenena maro izay mitsipaka ny fahefan’ity milisy ity sy ny andriamanitra izay nametraka azy.
Ho maro ny fanjakana no hanampy tosika sy haneho fanoherana, hiverina amin’ny vahoaka ny fitiavan-tena sy ny fieboeboana.
Hanapaka ny fifandraisana amin’Andriamanitra ny mpanjaka sy ny zanak’Andriana:
Zava-poana anefa izany rehetra izany satria hihomehezan’Andriamanitra (And 4)
Mampitandrina ireo amin’ny fahaviniran’Andriamanitra ka mampangorohoro azy amin’ny fahatezerany (And.5)
Tsy misy tian’Andriamanitra ho very ny olona, ka dia nanokatra lalana ahazoan’ny olona mitodika sy miverina aminy Andriamanitra. Miditra an-tsehatra Izy mampahafantara ny tendriny amin’ny alalan’i Jesoa Kristy ho fanehoan’ny heriny.
Tsy nanaisotra ny fahasoavany Izy. Jesoa Kristy no Mesia, iraka nalefan’Andriamanitra hitondra ny vesatra samihafa mianjady amin’ny mpino. Izy no famonjena ho an’izay rehetra manaiky azy ho Mesia.
Andriamanitra dia manome toromarika, manambara ny torolalana tsy maintsy tanterahina raha te ho velona ihany koa ny olona.
Adalana sy tsy fieritreretana, mivoana amin’ny tsy izy tanteraka ny fanoherana atao amin’Andriamanitra. Tsofiny rano koa ireo mametraka fitokisana Aminy. Ireo zavatra roa mifanohitra ireo no hitondrana ny vatsim-panahy ho antsika.
Fiaretana na fijaliana sy ny fahombiazan’olona manaiky an’i Jesoa ho Mesia
Fijaliana arahina fahombiazana :
Manamarika na lakolosy ampitain’Andriamanitra fa misy farany ny fiainana ety an-tany. Fiaretan’ny olona manaiky an’i Jesoa. Tsy maintsy miaritra ny mpino satria nahoana?
Raha mbola eto an-tany dia maro ny dingana sy zavatra mihatra tsy maintsy atrehina: famaizana, fakam-panahy ataon’ny satana sy ny endri-javatra maro samihafa miseho eto amin’ny fiainana, na mety fizahana toetran’Andriamanitra.
Tsy maintsy tonga ny andro farany, andron’ny fanatontoloana izao na ny “mondialisation”. Misy ihany koa ny fanapahan-kevitra iraisam-pirenena toy ny fanekena ny firaisana eo amin’ny samy mitovy fananahana. Maneho ny endrika fanoherana an’Andriamanitra izany.
And 10-11: Andriamanitra dia mampitandrina hatrany
And 7: Minoa anatra ianareo ry mpitsara ny tany “zanako ianao, izao no niteraka anao androany”
And 8: Andriamanitra nanome ny fahefana rehetra: “omeko lova jentilisa….”
Ho avy ny Tompo hitondra fiadanana, mbola fanasana sy fialana nenina no ataony ho an’ny olombelona rehetra hilefitra, hanaiky fa Jesoa no ilay Mesia. Tsy misy afaka miala isika na dia iray aza. Miaina ao anaty tontolo tsy mitoetra, mihozongozona isika, tsy maharitra. Mbola manome “sursis” ho anao Andriamanitra, indrindra ianao milaza ho mpino amin’izao fotoana fahatsiarovana ny nahatongavan’ny Mpamonjy izao.
Raha tsy mibebaka isika fa mikiry amin’ny fanao ratsy hatrany dia tsy maintsy hihatra aminao, amiko ny didy fanamelohana amin’ny fotoana tsy fantatra, tsy ampoizina.
Sarisary mpifanantonana sy fifandraisana no misy eo amin’ny samy olona, vetivety dia mijoro, vetivety dia rava. Ny fahefana politika feno fihatsarambelatsihy, ny soa toavina ara-moraly na ara-pinoana dia mivoatra ary miovaova araka ny firehana misy sy mijoro eo amin’ny fiarahamonina.
Ao anatiny fiovaovana izay mandrafitra ny fiainan’ny fiarahamonina, isika olombelona na isika milaza ho kristiana aza dia tsy mahita izay asiana ny tenantsika, toa mahatsiaro latsaka an’elanenany, tsy mahajoro akory.
Fanontaniana manitikitika tsy ahitam-baliny:
Mijery ny fahoriantsika ve Andriamanitra sa mitazam-potsiny?
Endrika manao ahoana tokoa no nanaovana ity olona ity, avy aiza no nipoirany?
Inona no atao hoe fiainana?
Zava-miafina, mistery ny fahafatesana sy ny tahotra aterak’izany. Mihazakazaka manao fikarohana ny “psychologue”, ny filozofy, ny siantifika, tsy mahita ny valiny. Midona amin’ny rindrina hatrany. Fa ianao kosa mba manao ahoana: manahy ny hoavinao ve ianao manoloana izany rehetra izany. Tsy foto-pisainana, tsy ezaka atao, tsy fahalalana no mitarika ny olona hanaiky an’i Kristy.fa asan’Andriamanitra ao anatintsika izany.
Ry fiangonana, ry mpitory Filazantsara namana, ho ahy sy ianao, misy fototra tsy azo hozongozonina ao dia Jesoa Kristy. Tsy misy mahay fanorenana hafa afa-tsy Jesoa Kristy(Kor I. 11). Tsy tokony ho kivy na hiraviravy tanana ny mpino. Raha mijery ny tantaran’i Davida Mpanjaka izay nisedra olana maro, tsy nivadika tamin’Andriamanitra ary nitalaho mba tsy ho tafarotsaka tao anatiny fandrika maro satria tsapany ny fahalemeny. (Sal 141 :3-4)
Isika matetika mahatsiaro voagejan’ny manodidina eo anatrehany fahasarotana ankehitriny. Mila miharitra sy maharitra isika. Mahazo vahana ny fandrebirebena sy fanambakana ataon’ny sasany. Fitiavan-tenan’ny olona no miteraka toetra te hifehy ny hafa hahatongavana amin’ny tombotsoa manokana. Ataony daholo ny fanomezan-toky, fandresen-dahatra manintona samihafa. Ary mety ho tonga amin’ny fandrahonana henjana raha miraikiraiky.
Mety ho voasarika ka halaviriny fahatokiana an’Andriamanitra ve ka ho resin’ny tahotr’olona ny mpino? Mety ho azon’ny fakam-panahy hitady vahaolana amin’ny fomba fanaon’ny olombelona ve: mandainga, miray tsikombakomba amin’izao tontolo izao sa hampangiana ny eritreritra ve izy.
Isika no afaka mamaly izany: tompon-tsafidy izaho sy ianao.
Eo no mampiavaka ny olona manaiky an’i Jesoa ho Mesia, ka na inona na inona karazana sedra dia mahay mitodika mitalaho amin’Andriamanitra hihazona azy tsy hilentika.
Ny hafatra tiana hampitaina (And 7): manompoa an’i Jehovah amin’ny fahatahorana.
Mitazona ny teniny hatrany Andriamanitra. (Toriteny 1:9). Tokana ny fototry ny finoana dia Jesoa Kristy. Izy no famonjeny sy vahaolana ho an’ny olona rehetra tamin’ny nanekeny ho sorona teo amin’ny hazo-fijaliana. Aza mitady fanohanana ivelany Kristy. (Apo 1:17-18)
Fahasambarana sy fahombiazana no setrin’ny fanekena an’i Jesoa ho Mesia
Efa planin’ Andriamanitra hatramin’ny ela ny hamonjy ny olona rehetra. Tsy manery an’iza na iza Izy fa miala nenina ary entitra ka mampitandrina ny olona mandrakariva. Tsy misy tiany ho very isika ary te hamonjy antsika Andriamanitra ka izany no nanomezany ny zanany dia i Jesoa Kristy hanjaka sy hametraka ny fahefany eto amin’izao tontolo izao (And7-8). Fotoana fampieritreretana antsika mialoha ny fitsenanana ny Noely izao, fa mampitodika ho amin’ny fitsenana amin’ny heriny sy ny voninahiny (And 12) eny amin’y rahony lanitra.
Ny fahatongavan’ny Mesia dia fampieritreretana ny olona ny amin’ny famonjena tian’Andriamanitra ankasitrahany. Ahafahany manatanteraka izany, dia tonga olona i Jesoa Kristy, tsy manana fahotana Izy, fa Andriamanitra. Velona mandrakizay (heb 7:25) ary manao fifonana ho antsika. Koa raha mandalo zavatra sarotra ny Tompo niady ho ahy sy ianao, dia isika no nioty ny vokatra, raha manaiky isika fa Izy no Mesia. Atolory an’Andriamanitra ny porofom-pitiavana. (Matio 1:20).
Tahaka ny hita amin’ny fiainana andavanandro: dokotera sy ny mpisolo vava (avocat) no tsy tokony hanafenana ny marina. Satria ataony ahoana ny hitsabo sy hiaro ny olona raha tsy mazava aminy ny mikasika ilay olona. Voafetra anefa ny mety ho vitan’ny olona. Fa Andriamanitra kosa tsy voafetra fa manana ny fomba hamonjeny ahy sy ianao. Izy irery no vahaolana.
(Lioka 17: 26), nilaza tamin’i Noa Andriamanitra momba ny fikasany fa hamotika ny olona ambonin’ny tany, fa izao tontolo izao kosa dia nanohy ny fiainana mahazatra, niliba tamin’izay heveriny fahafinaretana. Ny sambo fiara kosa eto dia vavolombelony fitsarana, niroso ary naka ny bikany isan’andro tsy nisy famantarana fa ho avy ny safo-drano. Maro tamin’ny olo-kendry no nandrabiraby an’i Noa. Tonga ny safo-drano ka izay tsy tao dia maty avokoa.
I Noa dia sarin’ ilay mpanjaka niantso ny olona hiditra no iraka hanambara ny marina, taratr’i Kirtsy izay nilaza ny fiadanana. Miantso ahy sy ianao Jesoa Kristy hanatona Azy. Mino an’Andriamanitra ohatran’i Noa ve ianao sa mandà sy mitsipaka tahaka izao tontolo izao. Mahatsapa fa voaro tahaka an’i Noa ve ianao?
VAVAKA FIFONANA SY FAMELAN-KELOKA
Taorian’ny toriteny sy ny feon-javamaneno fohy dia natao ny vavaka fifonana.
Nohiraina ny Hira FFPM 412:1-4 “Jehovah Tompo, o!”
Ny teny famelan-keloka dia notononina.
Taorian’ny teny famelan-keloka dia nohiraina ny FF 36:1-2 “Mifalia”, narahana ny fanekem-pinoana laharana fahaefatra sy ny vavaka mangina. Nanao ny anjara hirany ny STK.
Ny mpitantsoratra Razafimaharo Mamy no nanao ny filazan-draharaha. Toy izao manaraka izao ny vaovaom-piangonana hampitaina amin’ny mpianakavy ny finoana:
Raharaha ivelany :
29 desambra 2020: ny foibe FJKM dia manao fanompoam-pivavahana eto amin’ny fitandremana FJKM Amparibe, manomboka amin’ny 09ora maraina, izay alefa ny 01 janoary 2021. Mandray anjara hira ny HAFA.
Raharaha anatiny :
Manomboka amin’ny 06ora hariva ny herinandro sambatra
25 desambra: ivom-bokatry ny fiangonana. Misy ny rakitra alitara. Fidirana indroa: 7ora sy 10ora. Nisy ny fanentanana ara-pahasalamana sy ny isan’ny mpiangona izay tsy maintsy arahina
27 desambra: alahadin’ny fikambanan’ny Loholona sy ny Diakona
Fizarana valisoa ho an’ireo nandray anjara tamin’ny Soratra Masina
Gazety sy tranokala: manentana ireo mpianakavy ny finoana izay liana amin’ny fakana sary sy video. Hisy ny fampiofanana.
Fisaorana avy amin’ny Sampana Sekoly Alahady izay niara-niombom-bavaka tamin’ny herinam-bokatra
26 desambra: hanao tafika masina ny AFF
Novakiana ny tatitry ny fikambanan’ny mpitory Filazantsara vita fiofanana (FMFF) taorian’ny raharam-piangonana.
Ny biraon’ny fiangonana no namaky ny voady sy ny raki-pisaorana
FF 14: 3 “Jesoa, Apetraka aminao
FFPM 461:1 “Aoka ho an’Andriamanitra”
Natao nandritra ny fanati-pisaorana ny Hira FFPM 75:3:” Dera sy Laza no atolotray”
Fitondrana am-bavaka sy fanomezana valisoa notanterahin’ny Sampana tanora Zokiny ho an’ireo zanaky ny Fiangonana afa-panadinana ara-panjakana, SETELA, SEFALA, SEMI…. ary ireo mpianatra miomana ho Mpitandrina.
Natao ny vavaka fangatahina:
Fiangonana, mpitory ny Filazantsara, toby masina, kristianina eto amin’ny Fitandremana anaovana ny asa fanompoana (7ora sy 10ora), fikambanan’ny mpitory Filazantsara vita fiofanana, birao Mpitantana, komity, mpikambana,
mpiomana sy manomboka hiditra katekomena;
voka-dehiben’ny Fiangonana sy ireo mbola tsy nandray anjara sahirana, marary, mana-manjo
ireo manana hataka manokana, ireo nanefa ny voady sy raki-pisaorana
Taorian’ny vavaka fangatahana nataon’ny Mpitandrina Raharijaona Solofonirina izay nofaranana tamin’ny vavaka nampianarin’ny Tompo sy ny Hira FFPM 73:1 “Indro Zazakely”
Notononina ny tonjozotra 2020. Taorian’ny tso-drano dia noredonina ny Hira FFPM 73:2: “Zaza nantenaina”.
Fafana : Rabako Tovo
Fanamafisam-peo: Randriamahefa Tinarivony
Mpitendry orgue: Rajaofetra Philippe
Naka sary : Andriamampianina Faneva